Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Caawa Oo Jimce Ah Qoreen Wargeysyada Yurub - Gool24.Net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Caawa Oo Jimce Ah Qoreen Wargeysyada Yurub
Kooxaha Juventus iyo Ajax ayaa ka heshiiyay saxiixa daafaca dhexe Matthijs de Ligt, iyagoo ku heshiiyay lacag gaareysa 70 milyan euro, waxaa kaliya heshiiska ka harsan in lagu dhawaaqo. (De Telegraaf)
Manchester United ayaa weli xiiseyneysa saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Newcastle United Sean Longstaff inkastoo labada kooxood ay weli ku kala tagsan yihiin qiimaha ciyaaryahanka. (Sky Sports News)
Tottenham ayaa isku dayaysa inay xilli danbe ka afduubato kooxda Arsenal saxiixa daafaca kooxda Saint-Etienne William Saliba iyagoo dalab ka gudbiyay inkastoo uu Saliba uu ogolaaday inuu heshiis shan sannadood ah u saxiixo Gunners. (The Guardian)
Manchester United ayaa dooneysa inay daafac dhexe la soo wareegto ka hor inta aysan ku dhawaaqin heshiiska ay ku soo xerogelineyso xiddiga khadka dhexe ee Sporting Lisbon, Bruno Fernandes, waxaana ay diirada saarayaan daafaca Leicester City Harry Maguire. (A Bola)
Qorshe ay dooneysay kooxda West Ham oo ahaa inay weeraryahanka reer Argentina Gonzalo Higuain heshiis amaah ah dib ugu soo celiso Premier League ayaa waxaa soo diiday kooxda Juventus. (Calciomercato)
Agaasimaha kooxda Lyon Juninho Pernambucano ayaa qirtay in kooxdiisa aysan ceshan karin Nabil Fekir xagaagan iyadoo xiddiga khadka dhexe lala xiriirinayo kooxaha Arsenal iyo Liverpool. (Daily Mirror)
Goolhayaha halyeeyga ah Gianluigi Buffon ayaa lagu waramayaa inuu iska diiday kooxaha deriska ah ee Man United iyo Man City ka hor inta uusan dib ugu laaban kooxda uu jecel yahay ee Juventus xagaagan. (Daily Mail)
Everton ayaa isku dayaysa inay kula tartanto kooxda deriskeeda ah saxiixa xiddiga garabka ka ciyaara ee Lille Nicolas Pepe iyadoo 24 jirkaan uu wacdarro ka dhigay Ligue 1 xilli ciyaareedkii hore, laakiin Everton ayaa ka baqeysa in lacagta Liverpool loogu awood sheegto. (Daily Mirror)
Juventus ayaa lagu waramayaa inay ka laabatay xiisihii ay u heysay inay dib u la wareegto xiddiga khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ka dib markii gudoomiye ku xigeenka kooxda Pavel Nedved uu go’aansaday inay kooxda xiddigo kale diirada saarto. (Daily Mail)
Gudoomiyaha kooxda Tottenham Daniel Levy ayaa maanta kula kulmaya magaalada London dhigiisa kooxda Roma Franco Baldini iyadoo ka wada hadlay heshiiska daafaca Spurs Toby Alderweireld. Xiddiga reer Belgium ayaa hore waxa uu diirada ugu saarnaa Manchester United. (Sky Italia)
Taageerayaasha Manchester United ayaa u muuqda kuwa aaminsan in xiddiga khadka dhexe ee Faransiiska Paul Pogba inuu sii joogayo kooxda xilli ciyaareedka danbe ka dib markii uu ka mid noqday xiddigaha maanta soo bandhigay maaliyadooda cusub ee kulamada martida. (Daily Mirror)
Manchester United ayaa rag soo indha indheeya weeraryahanka kooxda Gremio Everton u dirtay Brazil iyadoo xiddigaan ay sidoo kale xiiseynayaan kooxda Man City iyo Bayern Munich. (Daily Mirrro)